तपाईंको ईकॉमर्स वेबसाइटमा यातायात ड्राइभ गर्नका लागि 10 प्रमाणित तरिकाहरू | Martech Zone
"ईकामर्स ब्रान्डले 80०% विफलता दरको सामना गरिरहेको छ"
यी कष्टकर तथ्या .्कहरूको बाबजुद, लेवी फेजेसनले सफलतापूर्वक आफ्नो ई-वाणिज्य व्यवसायको पहिलो महिनाको अवधिमा २ revenue,27,800०० डलर राजस्व आर्जन गरे। फेजेन्सनले २०१ wife को जुलाईमा मुशी नामको इको-मैत्री सामान ब्रान्ड लॉन्च गरे। त्यसबेलादेखि त्यहाँ मालिक र ब्राण्डका लागि कुनै पछाडि फर्कने छैन। आज, Mushie वरिपरि around 2018 बिक्री मा ल्याउँछ।
यस प्रतिस्पर्धी ई-वाणिज्य युगमा, जहाँ 50०% बिक्री सिधा अमेजन, ट्राफिक निर्माण, र रूपान्तरणमा असम्भव पछाडि छ। अझै, मुशीका सह-संस्थापकहरूले यसलाई गलत प्रमाणित गरे र उनीहरूको रोकावट बृद्धि गर्न रोकिदिए। यदि तिनीहरूले यो गर्न सक्दछन् भने, त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईलाई चाहिने सबै प्रतिस्पर्धी रणनीतिहरू हुन् जुन भीडमा ध्यान खिच्नको लागि प्रवृत्तिसँग मिल्दछ। यो गाईडले रूपान्तरणको बढी सम्भावनाको साथ तपाईको वेबस्टोरमा ट्राफिक प्राप्त गर्न अन्य उपयोगी ट्रिकहरूको साथमा मुश्रीको ई-कमर्स रणनीतिहरू ल्याउँछ।
तपाईंको E-वाणिज्य व्यवसायमा यातायात ड्राइव गर्न 10 तरिकाहरू
१. प्रभावकारी मार्केटिंगमा लगानी गर्नुहोस्
सुरुमा, म गुगल एडवर्डहरूको बारेमा लेख्दै थिएँ, तर तथ्या show्कले देखाउँदछ कि प्रयोगकर्ताहरूले विरलै विज्ञापनमा क्लिक गर्दछन् किन कि तिनीहरू अब विश्वास गर्दैनन्। धेरै जसो प्रयोगकर्ताहरूको क्लिक जैविक, भुक्तान गरिएको लिंकमा जान्छ।
यदि गुगल एड्वर्ड्स होईन भने, तब तपाईका उत्पादनहरूलाई लाखौंको अगाडि राख्ने सब भन्दा चाँडो तरीका के हो?
Feigenson सयौं ठूला र सूक्ष्म-प्रभावकर्ताहरु लाई यसको उत्पादनहरु लाई पुग्यो। उनले आफ्ना उत्पादनहरू na००० अनुयायीहरूसहित जेन्ना कुचर र कारा लोरेनलाई 4000००,००० अनुयायीहरूसँग पठाए।
अर्को एउटा रेशम बदाम दुधको केस स्टडी डिजिटल ब्यानर विज्ञापनको विपरीत ब्राण्डले प्रभावकारी मार्केटिंग अभियानबाट ११ गुणा बढी लगानीमा उत्पन्न भएको रिपोर्ट गरेको छ।
इ-कमर्स ब्रान्डले प्रभावकारी मार्केटिंगलाई महँगो लगानीको रूपमा लिन्छन्। तर फेजेन्सनले यस तथ्यमा जोड दिन्छ कि तपाईंले किम कार्दशियानलाई सम्पर्क गर्नुपर्दैन आफ्ना उत्पादनहरूको सन्देश फैलाउन। अवश्य पनि, यसले कुनै पनि ROI बिना नै तपाईंको बैंक भ break्ग गर्दछ। यसको विपरित, को लागी कसैको सट्टा अधिक प्रासंगिक ग्राहकहरु सम्म पुग्न को लागी प्रभाव प्रविष्ठ पत्ता लगाउनुहोस्। ठूला र माइक्रो-प्रभावकर्ताहरू इ-कमर्स ट्राफिक दश गुणा आरओआईको साथ बढाउन सक्षम छन्।
२. अमेजनमा रैंक
मलाई थाहा छ सबैजना गुगलमा रैंकिंगको बारेमा कुरा गर्दैछन्, तर अमेजन ई-कमर्स परिदृश्यको नयाँ खोज इञ्जिन हो।
अनुसार युएसए टुडे रिपोर्ट,% 55% अनलाइन शपर्सले अमेजनमा आफ्नो अनुसन्धान शुरू गर्दछ।
Feigenson यसको बढ्दो डिजिटल बिक्रीको लागि अमेजनको कसम खान्छ। अमेजन फुलफिलमेन्टले केवल फेजेन्सनलाई यसको सूचीको हेरचाह गर्न मद्दत पुर्‍याएन, तर उसलाई विशाल नयाँ दर्शकहरू र मार्केटिंग उपकरणहरू पनि प्रदान गर्‍यो, कुञ्जीशोध अनुसन्धान जस्ता, सदाका लागि बढ्नको लागि।
अमेजनले प्रस्ताव गरेको बाहेक, तपाईं विगतका ग्राहकहरूको वास्तविक समीक्षा स and्कलन गरेर र तपाईंको उत्पादनहरूको विस्तृत विवरण लेखेर ग्राहकहरूको द्रुत विश्वास जित्न सक्नुहुन्छ।
अब यसो नभन कि अमेजन तपाईको प्रतिस्पर्धी हो। यदि यो हो भने पनि, तपाईले प्रयोगकर्ताहरूले के खोजिरहनुभएको छ र अमेजनका ग्राहक डेटा मार्फत कसरी धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ।
SEO. एसईओ को पावर दिलाउनुहोस्
यहाँ आउँछ वेब स्टोर मालिकहरूको सबै समय मनपर्ने मार्केटिंग रणनीति। गुगलमा अमेजनमा रैंकिंग # १ सम्म ब्ल्याग लेख्न ग्राहकहरूलाई चिन्नेदेखि लिएर एसईओले प्रत्येक चरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
"कुल वेब ट्राफिकको%%% खोजी इन्जिनबाट आउँदछ।"
यसको मतलब SEO अपरिहार्य छ। केही फरक पर्दैन कि सामाजिक मीडिया मार्केटिंग शीर्षमा कसरी वृद्धि हुन्छ, प्रयोगकर्ताहरूले अझै पनि उनीहरूले खरीद गर्न चाहेको उत्पादनहरू खोजी गर्न गुगल खोल्दछन्।
एसईओ को साथ शुरू गर्न, तपाइँ कुञ्जी शब्दहरु को साथ शुरू गर्नु पर्छ। प्रासंगिक उत्पादनहरू खोज्नको लागि गुगलमा राखिएको कुञ्जी शब्दहरू स collecting्कलन सुरू गर्नुहोस्। अतिरिक्त मद्दतका लागि गुगल कुञ्जी शब्द योजनाकार प्रयोग गर्नुहोस्। वा तपाई पनि भुक्तान उपकरणबाट सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ जस्तै Ahrefs को लागि उन्नत SEO रणनीति.
तपाईंको उत्पाद पृष्ठहरू, यूआरएलहरू, सामग्री, र जहाँ आवश्यक छ शब्दहरूको आवश्यकतामा तपाईंको सबै एकत्रित कीवर्डहरू लागू गर्नुहोस्। कीवर्ड स्टफिंगमा ठक्कर नपुगेको कुरा निश्चित गर्नुहोस्। गुगल दंडबाट सुरक्षित रहन तिनीहरूलाई प्राकृतिक रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।
Strate. सामग्री रणनीति बनाउनुहोस्
तपाईं केहि लेख्न सक्नुहुन्न, यसलाई प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्न, र श्रोताको लागि तपाईंको उत्पादनहरूको गीतहरू गाउन आशा गर्दछ। साथै, तपाईं आफ्नो उत्पादनहरूको जागरूकता फैलाउन लेखहरूमा मात्र भर पर्न सक्नुहुन्न। सामग्रीले लिखित शब्दहरूको सीमा पार गर्यो। ब्लगहरू, भिडियोहरू, छविहरू, पोडकास्टहरू, आदि, सबै सामग्री सामग्री कोटि अन्तर्गत गणना गर्दछ। अनियमित सामग्री निर्माणले तपाइँलाई के बनाउने, कसरी सिर्जना गर्ने, र कहाँ प्रकाशित गर्ने भन्ने बारे भ्रमित गर्दछ। त्यसकारण सामग्री रणनीति तपाईंको समय बचत गर्न र सही च्यानलबाट सही ट्राफिक उत्पन्न गर्न अनिवार्य छ।
सबैभन्दा पहिले, तपाईंलाई आवश्यक सामग्रीको विभिन्न ढाँचाहरू लेख्नुहोस्। उदाहरण को लागी,
उपयोगीता र उत्पादनहरूको लाभहरूमा लेख
प्रयोगकर्ता द्वारा उत्पन्न सामग्री
वा तपाईसँग जो शस्त्रागारमा छ।
लेखक, डिजाइनर, वा जसले सामग्री निर्माण प्रक्रियामा भाग लिन्छ त्यसलाई कार्य दिनुहोस्। समयमै सामग्री प्राप्त गर्न मान्छेलाई शुल्कमा राख्नुहोस् र ठीक ठाउँमा प्रकाशित गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, एक SEO विशेषज्ञ को कम्पनीको ब्लग मा प्रकाशित हुन को लागी एक लेख को ख्याल गर्नुपर्छ र सामाजिक मिडिया मा प्रचारित।
A. एक रेफरल कार्यक्रम घोषणा गर्नुहोस्
म अझै पनि ती दिनहरू सम्झन्छु जब अमेजन ई-वाणिज्यको लागि नयाँ थियो, मलाई पैसा पठाउँदै मेरा साथीहरूलाई साइट पठाउन मेलहरू पठाउँदै। यो वर्ष पहिले थियो। रणनीति अझै छ नयाँ ई-कमर्स स्टोरहरूको लागि प्रवृत्ति वा ती जो द्रुत कर्षण प्राप्त गर्न चाहान्छन्। वास्तवमा यस सामाजिक मिडिया युगमा जहाँ साझेदारी दैनिक अनुष्ठान हो, सबैजना आफ्ना साथीहरूलाई साइटहरू सन्दर्भमा बदल्दै केही पैसा कमाउने मौका खोज्न मन पराउँछन्। मेरा सोशल मिडिया मित्रहरु यो हर समय करते हैं। त्यसैले म यस युक्तिको बारेमा निश्चित छु।
6। ईमेल मार्केटिंग
ईमेल मार्केटिंगसँग अझै विशेष गरी ई-वाणिज्य साइटहरूको लागि शो चोरी गर्ने शक्ति छ। ईमेल मार्केटिंगको साथ, तपाईं द्रुत ट्राफिक जेनरेशनको लागि नयाँ उत्पादनहरू तपाईंको विगतका ग्राहकहरूलाई परिचय गराउन सक्नुहुन्छ। यसले तपाइँको वेबसाइट को जागरूकता फैलाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। ईमेल मार्केटिंग सामग्री, नयाँ आगमन, वा छुट प्रबर्धन गर्न लोकप्रिय च्यानलहरू मध्ये एक हो। र ती परित्याग गरिएका गाडाहरूलाई नबिर्सनुहोस्, जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले कार्टमा उत्पादनहरू थप्छन् तर कहिले खरीदमा क्लिक गर्नुहोस्। ईमेल मार्केटिंगको साथ, तपाईं प्रयोगकर्ताहरू उत्पादन खरीदको अन्तिम चरणमा लिन सक्नुहुनेछ।
यहाँ परित्याग गरिएको कार्ट प्रयोगकर्ताहरूको लागि ईमेलको उदाहरण छ:
Social. सामाजिक प्रमाणहरू सेट अप गर्नुहोस्
करीव %०% अनलाइन उपभोक्ताहरूले खरीद गर्नु अघि उत्पाद समीक्षाको खोजी गर्दछन्।
उत्पाद समीक्षा र उत्पादन प्रतिलिपिको विरोधको रूपमा १२ गुणा बढी भरोसा गरिन्छ।
सामाजिक प्रमाण विगतका ग्राहकहरूबाट ग्राहकहरूको लागि प्रमाण हो कि तिनीहरू तपाईंको ब्रान्ड र उत्पादनलाई विश्वास गर्न सक्दछन्। अमेजन सामाजिक प्रमाणको साथ भारी छ। थप रूपमा, सामाजिक प्रमाणले सामग्रीमा योगदान पुर्‍याउँछ, प्रयोगकर्ता-उत्पन्न सामग्रीको भारहरूको लागि खोज इन्जिनहरूको क्वेस्ट खुवाउँदछ।
त्यसमा कुनै अचम्म छैन, अमेजन यसको धेरैजसो उत्पादनहरूको लागि उच्च स्थानमा छ।
समीक्षा स collecting्कलन सुरु गर्नुहोस् यदि यसले थोरै लगानी लिन्छ भने पनि। उदाहरण को लागी, छविहरु वा भिडियोहरु संग समीक्षा पोस्ट गर्न को लागी पुराना ग्राहकहरुलाई पुरस्कृत गर्नुहोस् यातायातमा द्रुत बृद्धि गर्न र नयाँ ग्राहकहरुबाट तत्काल विश्वास जित्ने।
Social. सोशल मीडिया च्यानलमा देखाउनुहोस्
सामाजिक मिडिया प्रयोगकर्ताको दोस्रो घर हो।
सेल्सफोर्सले रिपोर्ट गरे %len% हजार वर्षले उत्पादन अनुसन्धान गर्न सोशल मिडिया च्यानलहरू प्रयोग गर्दछ।
मेरो बारेमा कुरा गर्दै, इन्स्टाग्राम विज्ञापनहरू (भिडियोहरू) सजिलैसँग मलाई उत्पादन किन्न वा सदस्यताको लागि सदस्यता लिन प्रभाव पार्दछ। त्यसैले म भन्न सक्दछ कि सामाजिक मिडिया च्यानलहरू तपाईंको e-वाणिज्य स्टोरको एक मिनी-संस्करण हुन सक्छ। सामाजिक मिडिया च्यानलहरूमा स्टोरहरू सिर्जना गर्नुहोस् जहाँ तपाईंको दर्शकहरू अवस्थित छन् र सामग्री लगातार रूपमा प्रकाशित गर्नुहोस्। जागरूकता फैलाउन र तत्काल ट्राफिक ड्राइभ गर्न विज्ञापनहरू पनि चलाउनुहोस्।
Best। बेस्टसेलरहरू अगाडि राख्नुहोस्
उत्पादनको अन्वेषणको लागि अमेजनमा हाम फाल्ने मेरो महत्वपूर्ण कारण भनेको अधिकतम समीक्षाको साथ बेस्टसेलरहरू हेर्नु हो। अमेजनले यो सुविधा एकदम राम्रोसँग निर्माण गरेको छ। म उत्तम नारियल तेल खोज्दै थिएँ। अमेजनले मलाई बेस्टसेलरबाट खरीद गर्नका लागि राम्रो कारण दिए।
यस सुविधाको साथमा, मलाई कुन उत्पादन किन्नको लागि गहिरो खन्न आवश्यक पर्दैन। र म सिफारिस गरिएको उत्पादन मा समीक्षा पढ्न पर्याप्त समय लाग्छ।
उत्तम बेच्ने उत्पादनहरू प्रदर्शन गरेर, तपाईं प्रयोगकर्ताहरूलाई देखाउँनुहुन्छ कि अरूले किन खरीद गरिरहेका छन् र किन उनीहरूले यसलाई प्रयास गर्नुहोस्। यो तपाइँको हेरचाह व्यक्त गर्न एक प्रमाणित तरीका हो - प्रयोगकर्ताहरूको विश्वास बढ्छ, जसले उनीहरूको खरीद निर्णयलाई जन्म दिन्छ।
तपाईंको उत्पादन वर्गीकृत गर्नुहोस् र अधिक बिक्री हुने उत्पादहरू निकाल्नुहोस्। जब तिनीहरू समान कुञ्जी शब्दहरूको खोजी गर्दछन् उनीहरू अघि आउन प्रोग्राम गर्नुहोस्। एक ब्रान्डको विकल्प वा प्रयोगकर्ताको सिफारिशको नामको साथ सबै भन्दा बेच्ने उत्पादनहरू ट्याग गर्नुहोस्।
१०. निश्चित सीमा पछि नि: शुल्क शिपिंग प्रस्ताव गर्नुहोस्
नि: शुल्क शिपिंगको लागि निर्दिष्ट सीमा राख्नुहोस्। उदाहरण को लागी, "१० डलर भन्दा बढीको अर्डरमा नि: शुल्क वितरण"वा जुनसुकै मुल्य तपाईको मन पर्छ।
यो एक राम्रो तरिकाले काम गर्दछ जब तपाईं प्रयोगकर्ताहरूमा उनीहरूसँग बाध्य नगरीकन सूचीमा थप आईटमहरू थप्न चाहानुहुन्छ।
अब तपाइको पालो
माथि छलफल गरिएका सबै विधिहरू कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ। तिनीहरू मध्ये केही समय लिन्छन् जबकि केहि तुरुन्त कार्य मा आउन सक्छन्। अब कार्य लिने कम समय लगाउनुहोस्, र तपाईंको टोलीलाई समय खपत गर्ने गतिविधिका लागि काममा लगाउनुहोस्। फिर्ता आउनुहोस् र मलाई सबैभन्दा धेरै मन पराउनुहुने मलाई बताउनुहोस्। शुभकामना।
टैग: अमेजनसामग्री मार्केटिङड्राइभ रूपान्तरणयातायात ड्राइभई-वाणिज्यइकमर्सइमेल मार्केटिङप्रभावकारी विपणनजैविक खोजसान्दर्भिकएसईओसामाजिक प्रमाण
लौरा हिमर एक महान सम्पादक हो। उनको आला क्षेत्र मार्केटिंग गाइड, फेशन ब्लगिंग, जीवनशैली र प्रेरणादायक लेखन हो। उनी फिटनेस फ्रिक हुन् र योगलाई माया गर्छिन्। लौरा एक निडर र रमाईलो-मायालु महिला हुन्।
अस्क्रीन: डिमान्ड र नेटिभ टिभी अनुप्रयोग प्लेटफर्ममा भिडियो
के हामी कृपया सावधान मिथकलाई मार्न सक्छौं?